सबै कर्मचारीहरुलाइ सरकारले दियो यस्तो निर्देशन ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > सबै कर्मचारीहरुलाइ सरकारले दियो यस्तो निर्देशन !
काठमाडौं । कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीकोबीच नै सरकारले सबै कर्मचारीलाई कार्यालय बोलाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीसँगै अपनाएको आलोपालो प्रणालीलाई खारेज गर्दै नियमित रुपमा कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालय सञ्चालन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अब कर्मचारीको घरमा बस्ने दिन सकिएको बताए ।
‘अब कर्मचारीले नियमितरुपमा कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो प्रणाली छैन।’ उनले सबै सेवा सञ्चालनमा आएकाले कर्मचारीको कार्यालयबाटै कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
आलोपालो प्रणाली अपनाउँदा कर्मचारीले बहानाबाजी गरेर कार्यालय नआउने गरेको समेत पाइएका मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पहिलो लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई सार्वजनिक बिदामा रुपान्तरण गरेको भएपनि पछिल्लो निषेधाज्ञा र लकडाउनमा आधाले कार्यालयबाट र आधारले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर त्यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन ।
देशभर करिब ८९ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
२०७७ असोज ४ गते ०८:१४ मा प्रकाशित
भोलिदेखि नयाँ नियम : मध्यान्ह १२ बजेसम्म मात्रै बजार तथा पसल खोल्न पाइने
सनराइज बैंकले ७४ प्रतिशत र मेगा बैंकले २० प्रतिशत नाफा बढायो
इलाम बजार स्थापना भएको २०० वर्ष पग्यो, यस्तो छ नयाँ वर्षमा २००औं बार्षिकोत्सव मनाउने तयारी
शेयर बजार अपडेट : तेस्रो घण्टामा ५६.४३ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम २ अर्ब १५ करोड